के महामारीको अर्को केन्द्र बन्दै छ अमेरिका?
नेपाल लाइभ बिहीबार, चैत १३, २०७६, ११:४९
एजेन्सी–चीन र इटालीपछि कोरोना भाइरस महामारीको अर्को केन्द्र अमेरिका बन्दैछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि अमेरिकामा देखिएका संक्रमितको संख्यालाई अनुमान गर्दै अमेरिका कोरोना भाइरसको नयाँ इपिसेन्टर बन्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनकी प्रवक्ता मार्गरेट ह्यारिसले पत्रकारसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएकी हुन्।
अमेरिकाका कोरोना भाइरसका संक्रमित बढिरहेको र यो मुलुक अब कोरोनाको नयाँ इपिसेन्टर बन्ने सम्भावना रहेको उनले बताएकी थिइन्।
जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको ताजा तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ६९ हजार १८ पुगेको छ। अमेरिकाभन्दा अगाडि इटाली र चीनमात्र रहेका छन्। इटालीमा ७४ हजार ३ सय ३६ र चीनमा ८१ हजार ७ सय २६ संक्रमित बिरामी पुष्टि भएको हप्किन्सको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
त्यस्तै अमेरिकामा हालसम्म ९ सय ४४ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो २४ घन्टामा अमेरिकामा ११ हजारभन्दा धेरै बिरामी थपिएका छन्। सबैभन्दा धेरै न्युयोर्क सिटीमा देखिएको छ।
न्युयोर्कमा ३० हजार कोरोना संक्रमित
अहिलेसम्म न्युयोर्क राज्यमा ३० हजार ८ सय १ मा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। न्युयोर्कमा मात्र २८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। न्युयोर्क सिटीमामात्र १७ हजार ८ सय ५६ मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। न्युयोर्कको वेष्टचेस्टरमा ४६९१, नासु काउन्टीमा ३२८५, सफल्कमा २२६० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
३२ सय प्रहरीलाई एकै पटक विदा
न्युयोर्क पुलिस डिपार्टमेन्टका २३६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसरी प्रहरी कार्यालय नै कोरोना भाइरसको जोखिममा परेपछि त्यहाँ आपतकालीन अवस्था सिर्जना भएको छ। यसरी संक्रमित हुनेमा १९७ जना अफिसरहरु हुन् भने अन्य सर्वसाधारण रहेका छन् ।
अन्य राज्यमा कति छन् ?
न्युजर्सीमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४४०२ पुगेको छ भने त्यहाँ ६२ जनाको मृत्यु भएको छ। न्युजर्सीमा ७३६ नयाँमा संक्रमित फेला परेका छन्। बर्गन काउन्टीमा १९ जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ । इसेक्समा ३८१, मिडलसेक्समा ३१६ , मनमाउथमा ३१३ र युनियन काउन्टीमा २६२ मा संक्रमण भेटिएको छ।
यस्तै, हडसन काउन्टीमा २६०, पासाइक काउन्टीमा २५५, मोरिसमा २२३, ओसनमा २२२ र समरसेटमा ११७ जनामा संक्रमण फेला परेको छ। मर्सर काउन्टीमा २, क्यामडेनमा ६१, बर्लिंगटनमा ४८, ससेक्समा २७ र हन्टरडनमा २५ जनामा संक्रमित देखिएका छन् ।
त्यस्तै ग्लोसेस्टरमा २३, वारेन काउन्टीमा १८, एटलान्टिक काउन्टीमा ९, केप मे काउन्टीमा ४, कम्बरल्याण्ड काउन्टीमा ३ र सालेम काउन्टीमा एकजनामा संक्रमण देखिएको छ । अन्य ९३३ जनामा पनि संक्रमण देखिएको छ, तर उनीहरु कुन राज्यका हुन् भन्ने खुल्न सकेको छैन।
१० हजारभन्दा धेरै सेना परिचालन
कोरोनाको महामारीविरुद्ध जुध्न अमेरिकामा १० हजार ७ सयभन्दा धेरै सेना परिचालन गरिएका छन्। दुईसाता अगाडि विभिन्न ६ राज्यमा ४ सय सेना परिचालन गरिएको भए पनि अहिले ५० वटै राज्यमा नेशनल गार्डका सदस्यहरुले सहयोग गरिरहेका छन्।
बुधबारसम्म १० हजार ७ सय सेनाले गुआम, प्युर्टोरिको, भर्जिन आइल्याण्ड र वासिङटन डिसीलगायत ५० वटै राज्यमा सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन्।
आगामी दिनमा सेना परिचालनको संख्या बढ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ। सेनालाई सार्वजनिक स्थलहरु सफा गर्न, औषधि छर्कन, लजिस्टिक र यातायातमा सहयोग गर्न, कोरोना भाइरसको परीक्षण भइरहेका स्थलमा सघाउन परिचालन गरिएको छ ।
कतिपयलाई मेडिकल पेशाकर्मीलाई सघाउन र खानेकुरा डेलिभरी गर्नमा समेत परिचालन गरिएको छ ।
डब्लुएचको चेतावनी : नयाँ इपिसेन्टरको खतरा
अमेरिकामा कोरोना भाइरसका संक्रमित बिरामी बढ्दै गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रवक्ताले अमेरिका कोरोना भाइरसको नयाँ इपिसेन्टर बन्ने सम्भावना खतरा रहेको टिप्पणी गरेकी थिइन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रवक्ता मार्गारेट ह्यारिसले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन्।
पत्रकारहरुले युरोपलाई उछिनेर अमेरिका कोरोना भाइरसको नयाँ इपिसेन्टर बन्न लागेको देख्नुभएको छ? भनेर सोधेका थिए । जवाफमा उनले अमेरिकाका कोरोना भाइरसका संक्रमित बढिरहेको र कोरोना भाइरसको नयाँ इपिसेन्टर बन्ने सम्भावना रहेको बताएकी थिइन् । अमेरिका र खासगरी न्युयोर्कमा कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामी बढ्ने दर उच्च रहेको उनको भनाइ थियो।
अमेरिकाभर २० हजार भेन्टिलेटरहरु स्टकमा रहेको र सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले बताएका छन् । न्युयोर्कका गभर्नर एन्ड्रयु कुमोले न्युयोर्कमा मात्र ३० हजार भेन्टिलेटर चाहिने बताएका छन्।
राहत प्याकेजको विधेयक सदनमा पेश हुदै
कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्न अमेरिकामा हरेक करदातालाई १२ सय डलर दिने लगायतका विषय समेटिएको प्याकेज सिनेटबाट पारित भएको छ । बुधबार मध्यरात प्याकेजसहितको विधेयक पारित भएको हो । मतदानमा उपस्थित सबै ९६ सिनेटरहरुले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए। विपक्षमा एकमत पनि नपरेकाले यो विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ । शुक्रबार विहान ९ बजे यो विधेयक मतदानका लागि हाउसमा लगिने तय भएको छ। यदि हाउसबाट पनि पारित भएमा यो अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आपतकालिन राहत प्याकेज हुनेछ।
२ खर्ब अमेरिकी डलरको यो प्याकेजमा एकजना करदातालाई १२ सय डलर, विवाहितलाई २४ सय डलर र १७ बर्षभन्दा कम उमेरका परिवारका सदस्यका लागि थप ५ सय डलर प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ । वार्षिक ७५ हजारभन्दा कम आम्दानी हुने एकजनालाई १२ सय डलर प्रदान गरिने छ। यदि दम्पत्तिले ज्वाइन्ट ट्याक्स फाइल गरेका छन् र उनीहरुको आम्दानी वार्षिक १ लाख ५० हजारभन्दा कम रहेको छ भने उनीहरुले २४ सय डलर प्राप्त गर्नेछन्।
के छ नेपालीको अवस्था ?
कोरोना संक्रमितमध्ये नेपालीको संख्या न्यूनमात्र पाइएको सार्वजनिक भएको छ । हालसम्म एक जनाले ज्यान गुमाएको र अन्य तीन जना अस्पताल भर्ना भएको तथा अन्य नेपालीहरु सेल्फ क्वारेनटाइनमा घरमै रहेको सार्वजनिक भएको छ।
न्युयोर्कको एल्महस्र्ट अस्पतालमा कोरोना संक्रमणका कारण अनिल लिम्बुले ज्यान गुमाएका थिए । उनको छोरा अस्पताल भर्ना भएका छन् । श्वास फेर्न समस्या भएपछि लिम्बुका २२ वर्षीय जेठा छोराको एल्महस्र्ट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। लिम्बु परिवारका अन्य सदस्यहरु भने घरमै आराम गरिरहेका छन्।
यसैबीच अर्का एकजना ६० वर्षीय नेपालीमा पनि कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएपछि केही दिनदेखि एल्महस्र्ट अस्पतालमा भर्ना गरिएका थियो तर उनी निमोनियोको विरामी भएको पाइएको छ। न्युयोर्कको ज्याक्सनहाइटमा बस्ने नेपाली उबर चालकमा पनि कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। उनको उपचार भइरहेको छ ।
नेपाली समुदायलाई सहयोग गर्न फेसबुक समूह
कोरोनाको लक्षण देखिएका नेपाली बिरामीको औषधि र ग्रोसरी ढोकामै लगिदिन न्युयोर्कमा नेपालीको फेसबुक समूह बनाएका छन्। ‘अर्जेन्ट नेपाली एड नेटवर्क फर कोभिड १९’ नाम दिइएको उक्त समूहमा कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा विभिन्न सूचनामुलक सामग्रीसमेत पोष्ट गरिएका छन्।
समूहका एड्मीन यादव बास्तोला छन्। कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएमा न्युयोर्कको कोरोना भाइरस हटलाइन ८८८ ३६४ ३०६५ वा न्युयोर्क स्वास्थ्य विभागको ३४७ ३९६ ७९९० मा सम्पर्क गर्न उनले सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै कोही व्यक्ति एक्लै भए या बिरामी भएको खण्डमा औषधि र ग्रोसरी ढोकामा छाड्ने व्यवस्था गरिने समेत जनाइएको छ।
(सीएनन, बीबीसी तथा नेपाली सञ्चार माध्यमको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री)